Izindaba - Ukuphrinta nokupakisha: Wazi kangakanani ngokuhlukaniswa kwezikhwama zokupakisha
Isikhwama sokupakisha kulula ukusiphatha futhi singasetshenziswa ukuphatha izinto. Izinto ezahlukahlukene zokukhiqiza, njenge kraft paper, amakhadibhodi amhlophe, izindwangu ezingalukiwe, njll. Uyasazi isigaba esithile sesikhwama?
1. Izikhwama zokupakisha zokuphromotha
Izikhwama zokupakisha ezenzelwe ukuthuthukisa zenzelwe indawo yokupakisha ukukhuthaza nokuthuthukisa imikhiqizo yazo. Lolu hlobo lokupakisha lunemibala ecebile, futhi umbhalo namaphethini aheha iso futhi aklanywe ngendlela efana nezikhwama ezejwayelekile, ngaleyo ndlela ahehe ukunakwa kwabathengi futhi athuthukise ukuthengiswa koMkhiqizo.
Emibonisweni, ungabona kaningi lolu hlobo lokupakisha. Igama lenkampani, ilogo yenkampani, imikhiqizo eyinhloko noma ifilosofi yebhizinisi yenkampani iphrintiwe kupakethe, ekhuthaza ngokungabonakali isithombe senkampani nomfanekiso womkhiqizo, okulingana ne-A propaganda ephathekayo, enokugeleza okuhlukahlukene, ayikwazi ukuhlangabezana nezidingo kuphela ukulayishwa, kepha futhi kunomphumela omuhle wokukhangisa, ngakho-ke kuyindlela edumile yokukhangisa yabakhiqizi nemisebenzi yezomnotho neyezohwebo. Uma ukwakheka kwalolu hlobo kwesikhwama sokupakisha kuhlukile, kukhiqizwa ngobuciko obuhle, umphumela wokukhangisa uba ngcono.
2. Izikhwama zokuthenga
Lolu hlobo lwesikhwama sokupakisha luvame kakhulu, lwenzelwe izitolo ezinkulu, izinxanxathela zezitolo nezinye izindawo, ukuletha lula kubathengi ukuphatha izinto zabathengi. Lolu hlobo lwesikhwama sokupakisha senziwe kakhulu ngezinto zepulasitiki. Uma kuqhathaniswa nezinye izikhwama, ukwakheka kwayo nezinto ezibonakalayo kuqine futhi kungabamba izinto eziningi, futhi izindleko ziphansi. Ezinye izikhwama zokuthenga zizophrinta imininingwane yomkhiqizo noma yenkampani, nayo engadlala indima ekukhuthazeni nasekukhulumeni.
3. Izikhwama zokupakisha izipho
Izikhwama zokupakisha izipho zenzelwe kahle, njengendima yamabhokisi e-boutique, angahle akhuphule inani lezipho. Imvamisa kunezinhlobo ezintathu zezinto zokwakha: ipulasitiki, iphepha, nendwangu, nobubanzi besicelo bukhulu kakhulu. Isikhwama esihle sokupakisha isipho singasetha kangcono izipho zakho. Ngezindlela zokuphila eziguquka njalo, abathengi banezidingo eziphakeme neziphezulu zezikhwama zokupakisha izipho, futhi izikhwama ezinjalo zokupakisha izipho ziya ngokuya zithandwa kakhulu.
Izikhwama zokupakisha zihlukaniswa ngokwezinto zazo
Embonini yokuphrinta, izinto zezikhwama zokupakisha ngokuvamile ziyiphepha elihlanganisiwe, iphepha elimhlophe, iphepha le-kraft, namakhadibhodi amhlophe. Phakathi kwazo, iphepha eligcotshisiwe lithandwa kakhulu ngenxa yokuba mhlophe kwayo okuphezulu nokubenyezela, ukuphrinta okuhle, nemiphumela emihle yokukhangisa ngemuva kokuphrinta. Imvamisa, ngemuva kokumboza ingaphezulu lephepha elihlanganisiwe ngefilimu ekhanyayo noma ifilimu le-matte, alinayo nje imisebenzi yokumelana nokuswakama nokuqina, kepha futhi libukeka licwengekile.